A NA-ARỤ nnukwu ọrụ n’ebe ga-emecha bụrụ isi ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova na Wọwik, nke dị na Niu Yọk. Obi na-atọkwa ndị so na-arụ ọrụ n’ebe ahụ ụtọ. Ọtụtụ narị ụmụnna nwoke na ụmụnna nwaanyị ahapụla ọtụtụ ihe ha na-eme ka ha nwee ike iso rụọ ọrụ a. N’agbanyeghị ihe ndị ha hapụrụ, ọtụtụ n’ime ha ekwuola na “o nwedịghị ọrụ ka iso na-arụ ọrụ n’ebe a mma.” Ka anyị leba anya n’ihe na-eme na Wọwik.
Olee otú obi dị ndị na-arụ ọrụ na Wọwik?
“Ihe na-eme na Wọwik abụghị naanị ụlọ ndị a na-arụ. Jehova jikwa ohere a na-eme ka ụmụnna ndị na-arụrụ nzukọ a ụlọ nwee ike ịrụkọta ọrụ ọnụ ka anyị nwee ike ichebara otú anyị si ahazi ọrụ buru ibu ndị a na-arụ ná nzukọ a echiche.”—Enrique Ford.
“Abụ Ọma 127:1 kwuru, sị: ‘Ọ bụrụ na Jehova ewughị ụlọ, ọ bụ n’efu ka ndị na-ewu ya na-arụsi ọrụ ike na ya.’ Ihe a Abụ Ọma kwuru gosiri na ọ bụ ngọzi Jehova ga-eme ka ọrụ a gaa nke ọma.”—Troy Snyder.
“O nwetụbeghị ihe mere ka okwukwe m sie ike ka ọrụ a m so na-arụ.”—Richard Devine.
Gịnị mere di na nwunye nwere ezigbo ego ji si ná nnukwu ụlọ ha kwaga n’otu ọnụ ụlọ?
Otú Ọrụ A Na-arụ na Wọwik Si Na-aga Nke 2